Sida Loogu Adeegsado Baraha Bulshadu Ku Caawiso Ganacsigaaga | Martech Zone
Sida Loogu Adeegsado Baraha Bulshada Si Loogu Caawiyo Ganacsigaaga
Isniin, Oktoobar 6, 2014 Isniin, Oktoobar 6, 2014 Douglas Karr
Marka la eego kakanaanta suuqgeynta warbaahinta bulshada, aaladaha, iyo falanqaynta, tani waxay umuuqan kartaa fariin aasaasi ah. Waad la yaabi kartaa taas oo kaliya 55% ganacsiyada ayaa dhab ahaan u adeegsada warbaahinta bulshada ganacsiga.
Way fududahay inaad ka fikirto baraha bulshada inay yihiin waalan oo aan qiimo ugu fadhiyin ganacsigaaga. Iyada oo dhammaan buuqa halkaas ka jira, ganacsiyado badan ayaa dhayalsanaya awoodda ganacsi ee warbaahinta bulshada, laakiin bulshada ayaa aad uga badan tweets iyo sawirrada bisadaha: Hadda waa meesha ay macaamiishu u aadaan raadinta alaabada iyo waxyaabaha ay ka kooban yihiin, raacaan oo ay la macaamilaan astaamaha ay jecel yihiin, fikradaha dadka badan si aad u hesho talooyin iyo tixraacyo, oo aad ula wadaagto waxyaabaha ku jira shabakadahooda. Placester
Loogu talagalay suuqleyda adeegsanaya warbaahinta bulshada, waa muhiim 92% suuqleyda ayaa tilmaamaya in baraha bulshada ay muhiim tahay ganacsigooda, ilaa 86% sanadkii 2013 - sida laga soo xigtay Baadhaha Baraha Bulshada Warbixinta Warshadaha Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada. Guud ahaan, miisaaniyadaha warbaahinta bulshada ayaa la filayaa inay laba jibbaaraan 5ta sano ee soo socota!
Waxaa la yaab leh, kuma riixno macmiil kasta inuu u boodo warbaahinta bulshada. Annagu ma yeelno maxaa yeelay waxaan inta badan ogaannaa inaysan lahayn aasaaska kale ee joogitaankooda khadka tooska ah meel. Waxay ka maqan yihiin goob habeysan oo si sahal ah loo maro. Waxay u la'yihiin barnaamij emayl si ay si joogto ah ula xiriiraan. Iyaga awood uma lahan inay booqashooyinka ku beddelaan beddelaad. Ama waxay ka liitaan kartida booqde degel websaydh ah oo ay ku baadhi karaan boggooda oo ay ku heli karaan macluumaadka ay u baahan yihiin.
Warbaahinta bulshada waa warbaahin isgaarsiineed, ma ahan oo keliya qaab kale oo lagu qanciyo dadaalka suuqgeyntaada. Waxaa jira rajo laga qabo dhagaystayaasha oo ah inaad noqon doonto mid jawaabcelin leh, daacad ah, oo wax ku tari kara warbaahinta bulshada. Haddii aad awoodid inaad taas sameyso, waxaad ka faa'iideysan kartaa warbaahinta bulshada tan tan iibka, suuqgeynta, jawaab celinta, iyo kordhinta gaadhitaankaaga. Shirkadaha badanaa waxay u maleynayaan in bilowga bogga shirkadeed ee Facebook ay tahay warbaahinta bulshada - laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo badan oo istiraatiijiyad bulsheed ah:
Maamulka Dhismaha - Haddii aad jeceshahay in lagugu aqoonsado lagana ixtiraamo meheraddaada, haysashada joogitaanka baraha bulshada ee weyn waa muhiim.
Dhagaysiga - Kaliya maahan inay dadka kula hadlayaan baraha bulshada, ee waa dadka adiga kaa hadlaya ayaa muhiim ah. A socodka Istaraatiijiyaddu waa lagama maarmaan in la helo wadahadal adiga kugu saabsan oo aan lagugu qorin iyo sidoo kale dareenka guud ee astaantaada, alaabooyinka iyo adeegyada.
Isgaarsiinta - Dhawaaqa aasaasiga ah, laakiin hubinta inaad isticmaasho kanaallada ay dadku ku dhegeysanayaan waa lama huraan. Haddii aad hayso warar muhiim ah ama arrimo taageero ah oo ku saabsan shirkaddaada, wadiiqooyinkaaga bulsheed ayaa si fiican u noqon kara meesha loo socdo si loo fuliyo istiraatiijiyaddaada xiriirka dadweynaha.
Adeegga macaamiisha - Haddii aad rumeysan tahay in marinnadaada warbaahinta bulshada ay ku xiran yihiin taageerada macaamiisha micno malahan… iyagu waa! Waana marinno dadweyne sidaa darteed awoodda aad u leedahay inaad ku xalliso arrimaha adeegga macaamiisha si dhakhso leh oo qancisa ayaa kaa caawin doonta dadaalkaaga suuq-geynta.
Qiimo dhimis iyo khaas ah - Dad badan ayaa isdiiwaan gelin doona haddii ay ogaadaan inay jiri doonaan fursado dalabyo gaar ah, qiimo dhimis, rasiidhyo iyo keydyo kale.
Humanity - Calaamadaha, astaamaha iyo hal-ku-dhigyada ma bixiyaan aragti badan oo ku saabsan wadnaha astaanta, laakiin dadkaagaa bixiya! Joogitaankaaga warbaahinta bulshada wuxuu fursad u siinayaa kuwa raacsan inay arkaan dadka ka dambeeya astaanta. Adeegso!
Kudar Qiime - Cusboonaysiintaada bulsheed markasta maahan inay adiga kugu saabsan yihiin! Xaqiiqdii, waxay u badan tahay inaysan had iyo jeer adiga kaa noqon. Sideed ugu dari kartaa qiimaha macaamiishaada. Waxaa laga yaabaa inay jiraan warar ama maqaal ku yaal goob kale oo macaamiishaadu ay ku qanacsan yihiin… la wadaag!
Infograafigani ka yimid Placester waxay bixisaa talo adag oo ku saabsan ganacsiyada doonaya inay bilaabaan ka qeyb qaadashada Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+ iyo barnaamijyada kale ee bulshada. Infographic wuxuu ku socdaa adeegsadaha illaa waxyaabaha aasaasiga ah ee laga filayo, dejinta bogagga boggaaga, iyo sida loo horumariyo istaraatiijiyadaada isgaarsiinta si aadan ugu dhawaaqin sida spammer!
Tags: abuuro astaamaha warbaahinta bulshadahorumariyo istiraatiijiyad warbaahinta bulshada ahimisa facebook ayaa cusbooneysiinayaimisa saacadood oo baraha bulshada ahimisa warbaahinta bulshada ayaa cusboonaysiinaysaimisa twitter ayaa cusbooneysiineysasida loosida loo adeegsado baraha bulshadameel dhigidwarbaahinta bulshadaMedia Social Suuqtalooyinka astaanta warbaahinta bulshada
Oktoobar 6, 2014 at 7:49 AM
Warbaahinta bulshada ayaa ku dhowaad baahi loo qabaa adduunka maanta ee internetka. Haddii aysan jirin wax kale oo sifiican u socodsiiya astaanta warbaahinta bulshada waxay u dhisi doontaa kalsoonida iyo kalsoonida macaamiishaada mustaqbalka. Iyada oo ay jiraan boggag badan oo halkaa ku yaal, dukaameeyayaashu waxay rabaan inay awoodaan inay aaminaan shirkadda ay wax ka iibsanayso. Haddii aad leedahay astaan ​​adag oo warbaahinta bulshada ah oo raacsan iyo cusbooneysiin tayo leh waxay u dhisi doontaa kalsooni deg deg ah martidaada.
Oktoobar 8, 2014 at 7:45 AM
Farriin weyn. Teknoolojiyadda ayaa lagu hagaajiyay fidintaas oo kale, soo saarayaasha ayaa si fudud ula xiriiri kara macaamiishooda siyaabo fudud oo dhaqso leh marka loo eego xilliyadii hore. Warbaahinta bulshada ayaa doorka ugu weyn ka qaadata sidii dadka loola xiriiri lahaa si hufan uguna qiimo badan. Si loogu daro liiskaaga, had iyo jeer way kafiican tahay inaad iswaafaqdo dhamaan boggaga warbaahinta bulshada, marka la eego sawirada, sawirada muuqaalka, lambarrada midabka, iyo macluumaadka. Tani waxay siin doontaa isticmaaleyaasha inay dareemaan inay joogaan meeshii saxda ahayd sidoo kalena ay reebayaan aragti ayna sameyn karaan aqoonsigaaga sumcadeed. Waad ku mahadsantahay wadaagista.
Waad ku mahadsan tahay macluumaadka. Warbaahinta bulshada waa mid aan lagu beddeli karin shirkado badan iyo gaar ahaan wakaaladaha maalmahan. Shirkadaha B2C waxay ku tiirsan yihiin gaaritaanka dhagaystayaashooda bartilmaameedka ah ee da 'yarta ah isla markaana si dhakhso leh oo wax ku ool ah ula macaamila. Qalabka sida Buffer, Hootsuite iyo Socialhub.io waa lama huraan daruuri tan. Jiilka soo socda ee xayeysiinta waa wada sheekeysiga iyo adeegsiga aaladaha casriga ah ee tan si ay ula qabsadaan tani waxay dhalin kartaa koritaan weyn.